ဗွီဒီယိုစက်ပစ္စည်းများယခု PIX-E5H ကိုတင်ပို့ပြီ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဗီဒီယိုကိုဖုန်းများအတွက်ကြေညာချက်များ Pix-E5H အခုတော့သင်္ဘော
ဗွီဒီယိုကိရိယာများ Pix-E5H NOW ကတင်ပို့ကိုကြေညာ
Pix-E စီးရီးများအတွက် firmware Update ကို v1.04 ဒါ့အပြင်ရှိနိုင်
REEDSBURG, WI, သြဂုတ် 31, 2015 - ဗီဒီယိုကိုဖုန်းများအတွက်, ဗီဒီယိုထုတ်ကုန်များ၏အမှတ်တံဆိပ်အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီး အသံဖုန်းများအတွက်, LLC, ယခု Pix-E5H တင်ပို့နေသည်။ အဆိုပါအလွန်အမင်းမျှော်လင့် Pix-E5H ရရှိနိုင်ဖြစ် 4K မှတ်တမ်းတင်မော်နီတာ၏ Pix-E စီးရီးအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကမ်းလှမ်း HDMISDI စွမ်းရည်မလိုအပ်ပါဘူးကြောင်းဖောက်သည်များအတွက် -only Input / Output ။ ဆက်စပ်. , ဗီဒီယိုဖုန်းများအတွက်လည်းများလွှတ်ပေးရန်ကိုကြေညာ firmware ဗားရှင်း 1.04 အဆိုပါ Pix-E5 နှင့် Pix-E5H သည်။
နှစ်ဦးစလုံး Pix-E1.04 နှင့် Pix-E5H ထောက်ခံမှု v5 နှင့်အတူ HDMI မှုအတွက်မှတ်တမ်းတင်အစပျိုးခြင်း Sony က နှင့် ကို Canon ကင်မရာများ။ အဆိုပါ update ကိုလည်းဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ကို USB-based SpeedDrive ™အတွက်အသုံးပြုမှုအတွက်အတည်ပြုမီဒီယာစာရင်းကိုဖို့ 500GB Samsung က 850 EVO mSATA Solid-State Drive ကို, ထပ်ပြောသည်။ သည်အခြားတိုးမြှင့်မှုများအပြင်, firmware ကို v1.04 ယခင်တိုးပွါး HDMI အသီးသီးလေးရှစ်ယောက်လိုင်းများမှအသံသွင်းအားစုများနှင့်အကျိုးရလဒ်များ။
"ကျနော်တို့ကတရားဝင်ဖွင့် IBC5အတှကျအခြိနျ၌, Pix-E2015H တင်ပို့ရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေ" ဟုပေါလုဣဇာက်, ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဒီဇိုင်းဒါရိုက်တာကပြောပါတယ် အသံဖုန်းများအတွက်, LLC ။ "နောက်ဆုံးလ Pix-E5 ထုတ်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တိုးမြှင့်မှုများနှင့်အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များအဘို့အတောင်းဆိုမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်လုံလောက်သောတုန့်ပြန်ချက်စုဆောင်း။ ဤပြောင်းလဲထည့်သွင်းနေချိန်မှာကျနော်တို့နောက်ထပ်များအတွက်လိုအပ်အသိအမှတ်ပြု HDMI လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို။ ကျနော်တို့ Pix-E ကိုမိသားစုသို့စက်မှုလုပ်ငန်းများကြီးထွားလာလိုအပ်ချက်များကိုထည့်သွင်းဖို့နည်းလမ်းသစ်တွေရှာဖွေနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
ငါးလက်မ, 1920- x ကို 1080-Resolution, 441-ppi Pix-E5 နှင့် Pix-E5H မော်နီတာနှစ်ယောက်စလုံးတိကျစွာစောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာတခုအပြည့်အဝ suite ကိုနှင့်တတ်နိုင် SpeedDrive မှ 4K ပြင်ဆင်ရန်-အဆင်သင့်ဖိုင်တွေမှတ်တမ်းတင်ဖို့စွမ်းရည်နှင့်အတူထုပ်ပိုးလာကြ၏။ တစ်ဦးအဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ HDMI-only ဗီဒီယိုကအခြားရွေးချယ်စရာ, အ Pix-E5H Proxy ထံမှ ProRes 422 HQ မှ Apple က ProRes ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများတစ်အကွာအဝေးမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ SDI နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးကြွလာသော Pix-E5 နှင့် HDMI I / O, အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံး Apple ကမှတ်တမ်းတင်ဖို့ကဆက်ပြောသည်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်® ProRes 4444 XQ ။
စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု tool များ၏အထင်ကြီး suite ကိုတွင်ထည့်သွင်းပြိုင်ဘက်ကင်းအာရုံစိုက်မြန်နှုန်းအဘို့, မှားယွင်းသောအရောင်များနှင့်မြင်းကျား, ထိတွေ့ကူညီသတ်မှတ်ဘောင်များအတွက်အမှတ်အသားများကိုလမ်းညွှန်နှင့် waveform, Histogram နှင့် vectorscope အပါအဝင်အတိုင်းအတာရှိသောအကွာအဝေး, TapZoom ™ဖြစ်ပါတယ်။ Pix-E ကိုမော်နီတာတစ်ခုအလိုလိုသိထိတွေ့မျက်နှာပြင်နှင့်အတူလွယ်ကူသော-to-access ကိုထိတွေ့နိုင်သောခလုတ်ပေါင်းစပ်တဲ့ "အကောင်းဆုံး-of နှစ်ဦးစလုံး-ကမ္ဘာ" user interface ကိုထည့်သွင်းကင်မရာ-mount ။ အဆိုပါမော်နီတာမှာလည်းကြံ့ခိုင်သေ-ချပစ်သတ္တုအိမ်ရာနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုခံနိုင်ရည် Gorilla ဖြင့်ကာကွယ်ထားအနေနဲ့ LCD display ကို feature® Glass ကို2။ ဤအင်္ဂါရပ်ကိုအများဆုံးအစွန်းရောက်များ၏ကွံပမှတက်မတ်တပ်ရပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်မှာတောင်းဆိုနိုင်သည်ဟုမော်နီတာရှာကြံရိုက်ကူးရေးနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်များအတွက် Pix-Es စံပြပါစေ။
Pix-E ထုတ်ကုန်များအပြည့်အဝ suite ကိုမှာခင်းကျင်းပြသပါလိမ့်မည် IBC 2015 (ခန်းမ 8, B59 ရပ်) ကနေနောက်ဆုံးပေါ်အသံထုတ်ကုန်များနှင့်အတူ အသံဖုန်းများအတွက်, LLC ။
1998 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, အသံဖုန်းများအတွက်, LLC ဘို့နှစ်ခုလုံးထုတ်ကုန်တွင်လည်းဒီဇိုင်း အသံဖုန်းများအတွက် အသံထုတ်ကုန်များနှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းများအတွက်ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။ အသံဖုန်းများအတွက် အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်, Episode ရုပ်မြင်သံကြားမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, newsgathering, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ရပ်နှင့်အသံစမ်းသပ်မှုနှင့်တိုင်းတာခြင်း application များအတွက်ခရီးဆောင်အသံရောနှော, ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံအသံဖမျးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိရိယာများပေးထားပါတယ်။ ဗီဒီယိုကိုဖုန်းများအတွက်အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီစတူဒီယို applications များ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအားကစားနှင့်ဖြစ်ရပ်များအဖြစ်မိုဘိုင်း, တီဗီ, ရုပ်ရှင်နဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဘဏ်ဍာအပါအဝင်ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး၏အကွာအဝေးဖြေရှင်းပေးသောဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်, မော်နီတာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ပေးထားပါတယ်။
အဆိုပါ အသံဖုန်းများအတွက်, LLC ဌာနချုပ် Reedsburg, Wisconsin ပြည်နယ်အတွင်းတည်ရှိသည်။ အပိုဆောင်းရုံးများ Madison, Wisconsin ပြည်နယ်, ချီကာဂို, အီလီနွိုက်ပြည်နယ်နှင့်ဘာလင်, ဂျာမနီမှာတည်ရှိပါတယ်နေကြသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့, သွားရောက်လည်ပတ် အသံဖုန်းများအတွက် နှင့် / သို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုဖုန်းများအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ: www.sounddevices.com နှင့် www.videodevices.com.
4K IBC 2015 isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော Pix-E အသံက တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုဒေဝီ 2015-08-31
ယခင်: IBC 2090 မှာဥရောပစျေးကွက်မှ Miller ကအရည်ခေါင်းဆောင်များ (ဥရောပ) Ltd စျေး Cineline 2015 tripod စနစ်